Osisi dị iche site n'aka aka - usoro nhazi n'ụlọ, karịa iji dochie ya?
Ogige na - eji aka ha aka - otu uzommeputa, esi esi nri nke ọma na ihe nwere ike dochie?
Iji dozie ogige dị n'aka aka gị, ọ dị mkpa ka ị mara uzommeputa. Nke a bụ ngwá ọrụ na-ewu ewu maka ndị bi n'oge okpomọkụ, na-eji ịkpụ na ịgwọ ọnyá na osisi. Ihe ahụ ga-anagide ma ọ bụ obere nchacha na obere ihe.
Agha agha na aka aka gị
Ogige nchedo ogige dị mfe ịzụta na ụlọ ahịa ahụ maọbụ mee site n'ike nke aka gị. Dabere na ihe dị nso, dozie mixtures dị iche iche. Edinyere ugbo n'ubi kwesiri ime dika akwukwo nri, nke di otutu. Ọ dị mma na isi ha bụ rosin, beeswax ma ọ bụ resin coniferous osisi.
Kedu ihe eji ogige dị?
A na-emegharị ihe na ọnyá nke osisi iji chebe ha pụọ ​​na nrịcha, ụmụ nje, nje na site na mfu nke mmiri. Mmebi nke ubi na-akpata:
mmebi nke òké;
ọrịa na oria na nje.
Ogige dị iche iche mgbe ngwa na-agbasa na akụkụ ndị emetụtaghị ozugbo, na mgbe ịkpụ bụ ntakịrị nkụ. Ọ dị mfe ịkwadebe ma tinye aka na alaka na kporo, ụdị nsị ahụ adịghị emerụ aka na ihe, ọ dịghị ada. Ihe mejupụtara na-egbochi mmiri ma gbochie nchịkọta nke ọnyá. Mee ka ọ dị mma n'oge okpomọkụ - n'etiti oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi na ihu igwe.
Kedu ka esi mee ka ubi dị iche iche n'ụlọ?
A na - ekewa ihe niile na ụdị abụọ - okpomọkụ na - eguzogide (a ghaghị ịsa ọkụ tupu ha ejiri ya) na oyi na - eguzogide (mmanya na - etinye na ngwakọta). Ogige na-eji aka ha aka - ịchọta ntụziaka maka ointments na-esi ísì ụtọ:
Ntụziaka na-adabere na paraffin: paraffin - 6 mbak, rosin - 3 mbak, mmanụ oriri - 2 mbak. A gbazere paraffin ahụ, a gbakwụnyekwara rosin dị mma. Podtyazku ọkụ, tinye mmanụ na obụpde maka minit 30. A na-eme ka uka ahụ dị mma ma kpoo ya ka ọ bụrụ nke ọma.
Ntụziaka dabeere na wax: rosin - 4 mbak, beeswax - 2 mbak, abụba abụba - 1 òkè. Ejiri agbaze, na-etinye ihe niile na ya, sie maka nkeji iri abụọ, mma, gwakọta ya.
Ogige var na aka aka - Zhukovsky si uzommeputa: beeswax - 1 òkè, rosin - 1 òkè, abụba - 1 òkè. A na-agbaze ihe ndị ahụ na arịa dị iche iche, wụsara ya na otu. N'okpuru dị iche iche, anyị na-anakọta mmiri dị jụụ, wụsara ya ogige dị iche iche. Mgbe ọ na-akụda, a na-ewepu ya na mmiri, a na-etinyekwa bọl n'ime akwụkwọ a na-egbuke egbuke.
Ugbo dị iche iche na-eguzogide oyi - na-agbanwe, anaghị agbaba n'ime okpomọkụ ma ghara imeghere na ntu oyi. Ntuziaka nke ntụziaka:
Ntụziaka Reshetnikova: resin fir - 10 mbak, odo wax - 1 òkè, mmanya mmanya - 1 òkè. Ihe na-agbanye mmiri na mmiri resin, mgbe ha tinye mmanya na-aba n'anya. A na-agbasa ngwakọta ya na ahịhịa, ọ na-eme ka plastic dị na oyi ma ghara ikwe ka mmiri banye.
Ntụziaka nke The Hague: ala resin - 400 grams, soda - 1 teaspoon, mmanya ọgwụ - 60 ml, gom - 4 g. Resin na-ewe iwe, tinye mmanya na ya. A na-agbaze camel na soda na mmiri, a na-agwakọta ihe oriri niile.
Osisi dị iche iche dịka ntụziaka Rayevsky si dị: nri osisi - 500 g, mmanya ọgwụ - 60 ml, mmanụ a kpara - 2 tbsp. spoons. A na-ewe iwe ọkụ na obere okpomọkụ, na-agbakwunye ya mmanya na mmanụ.
Ogige VAR - esi eji ya?
Iji mee ka osisi ghara imerụ ahụ, arụ ọrụ na nkịta ọhịa kwesịrị ime n'ụzọ ziri ezi:
Ịkwesighi ibubata osisi ndị nwere ọrịa - niile akọrọ, akụkụ na-adịghị mma ga-ebipụ.
Bee tupu nhazi iji kpochaa ya iji mee ka ọ dị mma.
Ngwa ọrụ na aka tupu ọrụ kwesịrị ịṅụ mmanya na-aba n'anya.
A na-ejikọta ọnya ahụ na 2% ngwọta nke ọla kọpa sulfate.
Ogige a na-ekpo ọkụ na-adọrọ adọrọ na njupụta plastik - a na-etinye arịa ahụ na mmiri ọkụ.
Maka ịgwọ ọnyá, ọ dị mma iji spatula osisi ma ọ bụ ahịhịa. Nri mmanu kwa uzo ogugu nke mmuo 3-5 mm n'elu ebe mebiri emebi.
Esi eji dochie ubi a?
Ọ bụrụ na ogige ahụ ga-emechi ya na ọnyá na osisi, ma ọ dịghị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị na aka ya, a pụrụ itinye ihe ndị ọzọ. Mgbanwe nke ogige ubi - ogige na ụrọ, ejiji, agba, ihicha mmanụ. Ụkpụrụ nke omume bụ otu ihe ahụ maka ha - ọnya-ọrịa, bactericidal, ọgwụgwọ. A na-agbasakwa ụma na mpaghara na mpaghara ndị mebiri emebi site na osisi spatula ma ọ bụ ahịhịa. Na-agbanwe ogige ubi:
Clay putty. 200 grams ụrọ weere na 100 g nke mullein, tinye obere ahịhịa na obere ọla kọpa sulfate. Ihe niile na-agwakọta ya na njupụta nke utoojoo ude ma tinye ya n'ọrụ.
Ugbo ala. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla akaebe, ịnwere ike ịchọta clod nke ụwa ma kpuchie saịtị ahụ na-agwọta ya, site n'elu, mechie saịtị ahụ na ákwà.
Polyethylene. Na-egbochi ịkpụ na ihichapụ nke pathogens. Cellophane kwesịrị iji kpuchie ogwe osisi ahụ gbajiri agbaji, mgbe ụfọdụ, ọ ga-ezu iji weghachi osisi ahụ.
Kedu ihe dị mma - ogige dị iche iche ma ọ bụ agba?
Ọtụtụ ndị na-elekọta ugbo kama ịgha mkpụrụ osisi ubi na osisi mmanụ, nke na-agụnye mmanye mmanụ. A na-etinye ya na mpaghara ahụ mebiri emebi site na ahịhịa. Mmetụta nke usoro a bụ na ka oge ụfọdụ gasịrị, a na-asa mkpuchi ma na-emerụ ọnyá ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na emeghị nke a, osisi sitere na mmiri mmiri ozuzo nwere ike ire ere, kpoo ma daa mbà, na-eme ka oghere. Ọ ga-enwe mmetụta nke nje bacteria na nsị, osisi ahụ nwere ike ịrịa ọrịa, nke ga-emetụta mkpụrụ osisi ahụ.
Plasticine kama ichikota chi
Ihe ọzọ na-emechitere ya bụ kichin bụ plasticine. Ọ dịghị emebi anụ ahụ dị ndụ, na-echebe ebe ndị ahụ merụrụ ahụ, na-emerụ ahụ ruo ogologo oge. A nọgidere na-etinye plastine maka ihe dị ka afọ abụọ, ebe ọ bụ na a ghaghị ịmegharị ogige dị iche iche n'afọ ọ bụla. N'ọnọdụ nke ịmalite ọnyá, karịsịa na ebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ dị mfe - anaghị esi ebe ebido ahụ na-asọpụta, ọkpụkpụ ahụ adịghị asọba n'okpuru ogbugbo.
A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-etinye aka na ya, ọ ga-abụ na ogwu ahụ agaghị agbanye mgbọrọgwụ. Tupu awụnye ụrọ kwesịrị ịgbatị aka. Na ihu igwe dị ọkụ, ọrụ ya dị mfe karịa aghara aghara aghara aghara, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ka ọkụ kpoo ya ogologo oge, ọ ghara igbapu na saịtị nhazi. Ya mere, eji plasticine eme ihe dika ogige putty.
Ọgwụgwụ mmiri nke ogige site na pests na ọrịa na - otu kacha mma iji chekwaa osisi kachasị amasị gị?
Mgbe kụrụ eyịm na oghe ala - iwu dị mkpa nke ịkụ
Ndị na-eme ka osisi na-eto eto
Iche-iche nke violets
Ugboro ole ka mmiri na-acha n'oge okpomọkụ?
Orchid na-elekọta n'oge oyi
Gini mere geranium anaghị ama okooko?
Kedu ụdị tomato ndị kacha arụ ọrụ?
Igwe ọkụ Greenhouse
Ogige tradescantia - kụrụ ma lekọta
Kedu otu esi eme ka orchid oge ntoju?
Veigela - na-asọba ma na-elekọta na-emeghe n'ala
Kedu ka esi ewepu tomato na-emeghe ala?
Osisi Plantain - ọgwụ Njirimara na ihe ngosi maka ojiji
Uwe nke igwe
Onye na-eri anụ shish kebab
Nri Mexico - nhọrọ kachasị mma nke ndị inyom Mexico
Ụdị ọkwa na ịzụ ahịa
Uwe mgbede na-acha odo odo
Uwe maka ụlọ ọrụ 2014
Ọchịchị gbara ọchịchịrị na akpụkpọ ahụ
Jennifer Lawrence siri ike ịghara ịda
Esi Emilio Pucci
Kedu mgbe obi na-amalite iti n'ime embrayo?
Esi esi esi nri egosiri eghe - ihe kachasị edozi maka nri dị ụtọ
Fenugreek - ngwa
Enwere ike iji mmanụ mmanu oxolin kpoo ndi ime ime?
Embassy nke San Marino na Kazakhstan
Kedu otu esi esi budata ihe omuma maka otu izu?
Mma-Atụmatụ site na Keira Knightley
Kedu ka esi eji aka gị mee ụlọ griin ha?
Ụdị ọdịda anyanwụ na uwe
Kwụsị ịkwa ákwá